घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू बेल्जियम फुटबल खेलाडीहरू Radja Nainggolan बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; "निन"। हाम्रो रजाजा नाङ्गगोलान बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ बिद्यार्थी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनको बारे मा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र अनलाईन भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उनी युरोपमा सबैभन्दा राम्रो र सबै भन्दा मिडफिल्डरहरू पूरा हुन्छन् तर केहीले हाम्रो रडगा नाङगोलनको जीवनीलाई धेरै रोचक छ भनेर विचार गर्छन्। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
रेजजा नाङगोलन बेल्जियम, एन्टिवर्पमा 4th मई 1988 मा जन्मिएको थियो। उनी आफ्नो विगतमा आमा, लिजी बोगार्वेन निंगगोलान र बुबा, मरिअस नाङगोलानमा जन्मिएका थिए। उनीहरूले उनलाई राडजा नाम दिए "राजा"। Radga एक जुत्ता जन्मेको थियो। तिनी आफ्ना तीन आधा भाइहरू र जुँगी बहन, जसलाई राना नाङगोलेन भनिन्छ। तल उनीहरूको बचपन फोटो हो।
बेल्जियममा, उनी फ्लेमिश आदिवासीमा उठाइयो तर उनी इन्डोनेशियाली मूलमा फसेका थिए। जडहरूमा, उनी ब्याट इन्डोनेशियाको एक इन्डोनेसियाली हो र धर्मले, बटक ईसाई प्रोटेस्टन्ट चर्चको सदस्य।
रडाजा अझै रोमन क्याथोलिकले उठाएको थियो र चाँडै डच, अङ्ग्रेजी र इटाली बोल्नुभयो, साथै फ्रांसीसी बुझ्न। एक सानो केटाको रूपमा, रडाजाले आफ्ना आमाबाबुबीचको घट्दो सम्बन्ध देखेका थिए। तिनको बुबाले परिवारमा साहसी भई हिँड्दा बेल्जियमबाट बाहिर निस्क्यो अनि फर्कियो इंडोनेशिया। राडाजा, तिनका बहिनीहरू र तिनकी आमाले आफूलाई पैसाको साथमा बाँच्नुपरेको थियो। कुनै पनि बच्चा जो अभिभावक ब्रेक-अपको माध्यमबाट बाँचेको हो भने केवल यो राम्रोसँग गहिरो भावनात्मक दुखाइ जान सक्छ। यो Radja को हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम थियो। प्रभावहरु लाई स्पष्ट रूप देखि उनको विकास मा एक प्रभाव थियो जो उनले आफ्नो बचपन दिन को समयमा सहन।
रडाजा र तिनको जुत्ता बहन, राना आफ्नो आमाबाट प्रोत्साहन पाएको छ कि फुटबलमा कुश्ती गर्न को लागी कि कुनै पनि वा सबै सफल हुन सक्छ। र त्यसोभए, तिनीहरूका क्षमताहरू थाह छ र तिनीहरू कहाँ देखिन्छन्, लिजी नाङगोलानले फुटबललाई आफ्ना बच्चाहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न एक माध्यमको रूपमा देखाए।
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
फुटबलको लागि राडजाको जुनून पाँच बज्यो। तिनको बहिनीको साथमा उनले ट्युनटानिया बोरहेगाउमा खेल्न थाले, आफ्नो गृहनगरको एक सानो क्लब। 10 को उमेर मा, उनले बेल्जियम शीर्ष उडान मा एक गर्मिनल बीर्सचोट मा गए। त्यो उनीलाई थाहा थियो कि फुटबल साँच्चै उनको र भविष्यको लागि भविष्य थियो। बैकअप गर्न र आफ्नो आमा निराश नगर्ने, रडजा कहिल्यै पढ्न रोक्दैन। उनको र तिनको जुत्ता बहन, राना उनको कक्षाको माथिका थिए।
Radja जीर्मिनल बीर्सट मा 2005 सम्म बने, जब उनले एल्सेन्ड्रोरो बेल्ल्टमीमीलाई ध्यान दिएका थिए जसले तिनलाई आफ्नो युवा क्यारियरको लागि सहि छोडेका छन। इटाली सेरी बी क्लब पेएसेन्जामा जान लागे। आफ्नो युवा क्यारियर पछि, उनले आफ्नो वरिष्ठ टोलीलाई पदोन्नति गरे। 2010 मा, उनले कोगलिरीमा गएर उनले तीन सत्रको लागि अविवाहित पहिलो छनोटको लागि खेले।
उनको प्रदर्शन Rossoblu उनी विशेष गरी आफ्ना प्रशंसकहरूमध्ये लोकप्रिय बनेका थिए, जसले उनलाई शीर्ष सङ्कलन क्लबको इतिहासमा उत्कृष्ट खेलाडी समावेश गरे। यसले रोमलाई 11 मा सेवाहरूको लागि जान्छ। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अहिले इतिहास हो।
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
फुटडाड रेडजाको लागि सुनौलो सुनको छ। एउटा ठाउँ जहाँ उसले छाया पार्यो र आफ्नो परेशान वास्तविकता देखि दूर रहयो। सायद, अर्को सुनको रूख जसले बढी छाया र सान्त्वना ल्याएको छ उनको प्रिय पत्नी, क्लाउडियासँग भेटिन्छ।
क्लौडिया नाङगोलियन लिलाई चित्रित गरिएको रेडजा नाङगोलानकी पत्नी हो। त्यो एक सरल, पृथ्वीमा र एक अत्यन्तै सुन्दर महिला हो जसले रोजगारीको जीवनको लागि उदासीन छ।
उनी भन्छन् कि उनी कसरी रेग्गा भन्छन् ..."मैले कोगलिरीमा रडजालाई भेटें र यो पहिलो नजरमा प्रेम थियो। जब मैले दुई महिना पछि सिकें कि उनी फुटबलर थिए, म छोड्न चाहन्छु। मलाई थाहा छ कि एक अमीर फुटबलरको जीवन व्यस्त छ, र त्यसो त, तिनीहरू धेरै प्रशंसक छन्। त्यस समयमा, म पूर्णकालिक समयको किनमेल मलमा काम गरिरहेको थिएँ, थोडा म अझै पनि यो सम्झछु। मासु को रूप मा उनले देख्यो, मैले शोक महसूस गरे जस्तो कि उनले मलाई भन्यो कि उनले मलाई प्यार गरे, पहिलो नजर मा आश्चर्यजनक रूप मा पनि। जब उहाँले मलाई भन्नुभयो रोममा जाँदैछु म यसलाई धेरै राम्रो लागेन। रोममा, सबैले कोगलीरीको विपरीत ठीकसँग लुगा लगाइएको देखिन्छ। यसले मलाई अनुकूल गर्नु अघि मलाई समय लिनुभयो। एक वर्ष पछि, म स्नीकरका साथ बाहिर जान्थें। म अझै मेरो पहिलो जीवनमा छुट छुट्यो, जहाँ मैले केही चीजहरू गर्न थप स्वतन्त्रता पाएको छु। "
क्लौडिया र रडाजा नाङगोलान दुवै एक्सएनएनएक्समा गाँट बाँध्ने निर्णय गरे। तल Cinecittà संसार को असाधारण पृष्ठभूमि मा, उनको इटालियन कास्टेल रोमनोको मनोरञ्जन पार्क मा उनको विवाह फोटो हो।
उनीहरूको विवाह गर्भको फलले तुरुन्तै आशिष् पाएको थियो। Aysha Nainggolan उनको छोरी छोरी 30 को 2012th दिनमा जन्मेका थिए।
क्लाउडिया आफ्नो प्यार, रजाजा नाङगोलान को पालन गर्न को लागी प्यार गर्दछ एक नयाँ साहसिक को लागि राजधानी मा आफ्नो बच्चा जो तल चित्र मा थोडा बढेको देखिन्छ।
जोडीले पनि बाह्य विवाहको समयमा विवाहको डाउनटाइम देखेको छ र यसलाई पारित गरेको छ। हालै, दम्पतीले सोशल मिडियामा रिपोर्ट गरिसकेको थुप्रै झलकहरू चलाए।
इटालियन प्रहरीले पनि दुर्व्यवहारको लागि रजाजा नाङगोलानको विरुद्ध आरोप लगाएको आरोप लगाएको छ। क्लाउडिया। सौभाग्य देखि, तिनीहरूले आफ्नो मतभेद संशोधन गरेका छन्।
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
बन्द गर्दै, रडजाले आफ्नो बुबा, मारियनस नाङ्गगोलनबाट बटाकको रगत पाएको छ जसले इन्डोनेशियाबाट पाउँछ। यो रेजजा नाङ्गग्लान राज्यका लागि उल्लेखनीय छ कि उनको सबै पिताको धन्यवाद, मरिअस, जसले आफ्नो देश छोड्यो, इन्डोनेशिया छोडेर मात्र बेल्जियममा ठूलो आशा गर्न चाहने गरी मात्र उनीहरूलाई बेल्जियम मार्फत तोड्ने जीवनको लागि अझ कठिन छ।
यसले मारियनस नाङगोलानलाई प्रेरित गर्यो इन्डोनेसियामा फर्कन आफ्नो व्यापार जारी राख्न। आज तिनको कडा मेहनतले भरिएको छ।, उनको पुत्र र छोरीले फुटबलमा ठूलो बनाएको थियो, मरिआउसस आफैले बलीको द्वीप रिसोर्टमा एक उद्यमी बन्नुभयो।
Piacenza मा पनि Radja आफ्नो बुबा संग दोश्रो फुटबलर्स जस्तै डेली अली.
क्षणमा 2007 एएक whopping 13 वर्षहरु फस्ट गर्नुहोस्। "हामी अन्तमा फेरि भेट्यौं। पापा मलाई र रियाना हेर्नको लागि बालीलाई इटालीबाट आउँछ " रेडजाले भने, जसले कहिल्यै आफ्नो बुबाको पापलाई आफ्नो हृदयमा राखेन।
आमा: Radja को आमा मूलतया बेल्जियम हो। विवाह गर्नुअघि, उनलाई मूल रूपमा लिइजी बोगार्ट्स भनिन्छ। लिजीले मरेससँग विवाह गरे र उनको उपनाम नाङगोलानमा परिवर्तन गरे। दुर्भाग्यवश, लिजी 2010 मा मृत्यु भयो, आफ्नो पति को त्याग देखि फर्कने तीन वर्ष पछि धीरज। उनको मृत्यु पछि, रजाजा उनको जन्म र मृत्यु को तारीखहरु संग उनको पीठ मा दुई ठूलो प्वाइंट टैट भयो। जस्तो देखिए। वास्तवमा, रजाजा उनको आमाले आफ्नी आमालाई पूर्णतया समर्पित गरेका छन्।
बहिनी: राना नाङगोलन उनको जुम्लाको भाइ, रडाजाको वरिष्ठ जुत्ता हो। तिनी एक दिन जे भएमा म्यानेज एनएनएक्सएक्स,3मा एन्टिवर्पको भाइ भन्दा पुरानो जन्मियो।
जस्तै बताए अनुसार, उनको भाइको जन्म जन्म 4th मई, 1988 हो। रेजजाको जुत्ता बहन, राना नाङ्गगोलन, जस्तै कि उनको भाइ जस्तो पनि एसएस रोमका महिला फुटबल पक्षको लागि लेखनको समयमा खेलिन्छ। त्यो उनको त्याग को उनको पिता द्वारा उनको पिता को साझा गर्दछ जो एक पल्ट उनको मात्र बच्चाहरु को रूप मा अनिश्चित अवस्था मा उनको परिवार को छोड दिए।
रोआना निंगगोलान रोमा आउनुअघि अझै पनि सक्रिय रूपमा बेल्जियमको महिला फुटबल क्लबमा खेलिरहेको थियो, कोन्टिच। उनले उनको टोलीलाई लोकप्रिय बनाएका थिए बेल्जियममा राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरू।
भाइ: म्यानुएल नोआआले तल चित्रण गरेको आधा भाइ हो Radja Nainggolan। उनको बारेमा जान्न पहिलो कुरा यो तथ्य हो कि नाबाओ एक चेल्सा फ्यान हो।
Radja आधा भाई, मनुअल नोआआ एक पल्ट प्रेस को छ; "मैले यो ऊ ठूलो बनाएको छु र धेरै समयहरूमा मेरो भाइ रड्जालाई चेल्सीमा जानुपर्छ। प्रीमियर लीग उनको स्वादको लागि आदर्श वातावरण हो। दुर्भाग्यवश, उनी रोमलाई धेरै धेरै माया गर्छन्। "
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -टैटू तथ्याङ्कहरू
रेडजा नाङगोलान, बेल्जियमले इन्डोनेसियाली जडहरूमा, बिना संदेह, एक फैशनेबल मानिस हो। 2014 मा रोमामा आइपुग्दा, उनको फुटबल नम्बर हरेक वर्ष बढेको छ। उहाँ क्षेत्रको खेलको लागि मात्र खडा नगर्नु हुन्छ तर यसको सम्पूर्ण शरीरमा असाधारण दृश्य र असामान्य ट्याटोहरू जुन वास्तवमा उत्तेजित दुखाइको साथ आउछ।
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -टैटू संग्रह
धेरै साक्षात्कारमा, उनले घोषणा गरेको छ कि उनको सबै टैटूले उनीहरूको अर्थ राख्छन् र उनीहरू उहाँलाई विशेष गरी विशेष गरी आफ्ना ढिलाइ आमालाई समर्पित हुन्छन्।
एसिड आफ्नो केश को हेरे, यदि हामी रडजा नाङगोलान को एक शीर्ष-डाउन रेडियोग्राफी गर्छन, हामी टैटू देखि एक स्वर्ग को मिल्यो, केहि नयाँहरु को द्वारा कवर गरिएको छ, जस्तै कि उनको गर्दन मा एक छ; "शुरुवात" (शुरुवात)। साथै, नम्बरहरूमा रोमीहरू जसको उनले उनले पेसेन्जामा आफ्नो पहिलो खेल खेलेका थिए, एक पंखित हृदयले प्रतिस्थापित गरेको छ जसले बेल्जियमको गर्दनलाई रेखा बनाउँछ। तल हेर;
शरीरको अगाडि भागमा देखिने दृश्यमान उनको गर्दनमा शक्तिशाली टैटू हो। यो ठूलो सुन्दर गुलाब हो।
त्यहाँ एक लामो सांप जुन आफ्नो टोरको माध्यमबाट चल्छ र यसको बीचमा उनी अंग्रेजीमा ट्याटू छ: "बिना बेरोजगारी रहनुहोस्। बिना निर्भरता प्रेम बिना बचाए सुन्नुहोस्। बिना अपमानजनक कुरा बोल्नुहोस् "। सांप माथिको निम्न पाठ छ: "एक जीवन, एक इच्छा" (एक जीवन, एक इच्छा)।
Nainggolan आफ्नो बायाँ हात मा हरित तम्ब छ र तल देखाइएको एक बुद्ध छ। तम्बू माथि एक कमल फूल हो। यसमा उनको पहिलो छोरीको नाम छ "अल्सा" बायाँ हात र धेरै ताराहरूको फोहोरमा। उही हातमा, एलीभिस भाषामा आफ्नी आमाको नाम छ।
औंठी को नजिकै, रडजा केहि पासा छ, एक संग संख्या5(मतलब हो, उनको जन्म महिना) र अर्को, संख्या 4, (अर्थ, त्यो मई को 4th मा जन्मिएको थियो)। उहाँसँग पनि एक शिलालेख छ जुन भन्छ ... "प्रेमलाई जीत" (मलाई जित्न मन लाग्छ) बायाँ हातमा। आफ्नो दाहिने हातमा, त्यहाँ एक छ कि ..."हराउन घृणा" (मलाई हराउन नफरतन्छ).
राधाले आफ्नो खुट्टामा कम टैटू छ। दाहिने जांघमा, उनले एक टोपी र आरम्भको आरएनएक्सएनएमएक्ससँग माइक्रोफोन टुट्यो। पिक्चरमा थप दृश्य देखिने उनको बायाँ जांघमा एक डरावनी ड्रैगन हो।
बाछोमा, यसमा4नम्बरको साथ उपनाम 'निन्जा' छ। उनको शिनमा चिनियाँ भाषामा उनको जुत्ता बहनको नाम र टङ्कमा, डलरको प्रतीक र " लास भेगास".
बाँया पैरमा एक सानो बाकस (पार्श्व) र अगाडि, एक आँखा संग एक तरवार समावेश छ।
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -व्यक्तिगत जीवन
Radja Nainggolan उनको व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषता छ।
शक्ति: उहाँ अविश्वसनीय लगाइको बावजूद विश्वसनीय, धैर्य, व्यावहारिक, स्थिर हुनुहुन्छ।
कमजोरीहरू: उहाँ जिद्दी हुन सक्नुहुनेछ, अधिकार र असम्भव।
रेडजाले मन पराउँछन्: टैटू, विशिष्ट बाल जस्तो देखिन्छ, बागवानी, संगीत, रोमांस, उच्च गुणस्तरको कपडा र हातले काम गर्दै।
के रेजाले नमनपराउँछ: अचानक परिवर्तनहरू, सम्बन्ध जटिलताहरू, कुनै पनि प्रकार र सिंथेटिक कपडाहरूको असुरक्षा।
सारांशमा, रडाजा व्यावहारिक र राम्रो हुन्छ। उहाँ कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले आफ्नो श्रमको फल फसलको माया गर्नुहुन्छ। उनीहरूलाई प्रेम र सौन्दर्य घनिष्ठ हुन आवश्यक छ र सबै इन्द्रहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्पर्श र स्वाद बुझ्छ। Nainggolan सहन र व्यक्तिगत छनौटको बिन्दु सम्म पुग्न सम्म आफ्नो छनौटमा छडी गर्न तयार छ।
Radja Nainggolan Childhood Story Plus Untold जीवनी तथ्य -धूम्रपान
उनले हालै नै बेल्जियम कोच रोबर्टो मार्टिनले आफ्नो आदतको कारणबाट रिपोर्ट गरेपछि रिपोर्टको बारेमा सिगरेटको बारेमा स्पष्ट रूपमा बोलेको छ।
'मलाई शर्मिला छैन किनकि म धुआँन र मैले मेरो यो आदत कहिल्यै लुकाएको छैन' नाइङ्गगोलानले बेल्जियम प्रशिक्षण शिविर बाहिर पत्रकारहरूलाई भने। "मलाई थाहा छ कि म राम्रो उदाहरण सेट गर्नुपर्छ, म बच्चाहरु छन् ... तर म केवल फुटबलर हुँ, म मेरो काम गर्छु। सबैलाई थाहा छ कि म धुम्रपान गर्दछु र म यसलाई लुकाउन सक्दिन, तर मलाई शर्मिला छैन।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो रेडजा नाङगोलान बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्याङ्क पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाइँ केहि कुरा देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिएन, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा ठाँउ दिनुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।